Khangela iindawo ezinezinto zokulungela wonke umntu kuAirbnb | Airbnb
Ukulungela wonke umntu kuAirbnb
Nantsi indlela esenza ngayo kube lula ngakumbi ukuhamba nathi.
Izihluzi zokukhangela eziphuculiweyo
Sizenze zalula izihluzi zethu ezenza ilungele wonke umntu ukuze kube ngcono ngakumbi ukukhangela.
Veza uludwe lonke lezihluzi
Ukuhlolwa kokulungela wonke umntu
Siye sizihlole zonke izinto ezinceda ilungele wonke umntu ezifakwe Ngabubuki Zindwendwe beendawo ukuze siqinisekise ukuba zichanile.
Ukuthumela imiyalezo ngqo kuMbuki Zindwendwe
Ncokola ngqo noMbuki Zindwendwe ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngezinto ezenza ilungele wonke umntu zendawo okanye Into yakhe Enokonwatyelwa.
Indlela esenza uAirbnb alungele wonke umntu ngakumbi
UAirbnb unamaqela ajongene nokwenza iimveliso ezinokusetyenziswa ngumntu wonke. La maqela asebenzisana neenjineli, abayili nabanye abantu kwinkampani yonke ukuze aqinisekise ukuba iimveliso zethu zenziwa kucingwa ngokuba iza kulungela umntu wonke.
Senza uphando nabantu abafuna izinto ezinceda ilungele wonke umntu ibe sisebenza neengcali zasekuhlaleni. Ukuba unomdla wokuthatha inxaxheba kwisihlandlo esithetha ngokulungela wonke umntu kwa-Airbnb, gcwalisa ifomu yethu yokuphanda ngokulungela wonke umntu.
Imigangatho yokulungela wonke umntu kwi-intanethi
Sisebenzela kwimigangatho yokulungela wonke umntu kwi-intanethi echazwe Kwizikhokelo Zezinto Ezikwiwebhusayithi Zokulungela Wonke Umntu. Sithenga
nezixhobo zokuvavanya ngokuzenzekelayo ukuze sibhaqe iingxaki ezingakumbi.
Nantsi eminye yemibutho esisebenzisana nayo
Sikhona ukuze sikuncede
Yiya Kwiziko lethu Loncedo ukuze ufumane inkcazelo engakumbi
Ndingazisebenzisa njani izihluzi zokukhangela?
UAirbnb uzihlola njani izinto ezinceda ilungele wonke umntu?
Ndingaza naye umntu ondincedayo Kwinto Enokonwatyelwa?
Ndingeza naso isilwanyana esindincedayo?
Ababuki Zindwendwe banokuzinceda njani iindwendwe ezifuna izinto ezinceda ilungele wonke umntu?
Ababuki Zindwendwe banokuzifaka njani izinto ezinceda ilungele wonke umntu kwizindlu?